2:08 PM အရာရာ
ညရောက်တော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ ဒုက္ဒကစတော့ တာပဲ …. နှစ်ယောက်စလုံးက ဗိုက်အောက် တယ်ဆိုပြီး တအားအားနဲ့အော်တော့တာပဲ…… ဒါနဲ့ကျွန်တော်က သူတို့နှစ်ယောက် ဗိုက်အောက်နေတယ်လို့ ဦးလေးကို သွားပြောပြတော့ ဦးလေးက သူကြီးစီကကနေ ဆေးတောင်းပြီး တိုက်တာပေါ့…… သက်သာမယ်ထင်တာ ဘယ်ဟုတ်မလဲ စားထားတဲ့ အစာတွေကိုရော အော့်အန် တော့တာပဲ…. အခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာတယ်လေ….. ဗိုက်နာတယ်. . နောက် အော့်အန်တယ်…. နောက် အခုကိုယ်တွေလည်း ပူလိုက်တာ မပြောနဲ့ မီးခဲလိုမပူလို့တော်ပါသေးရဲ့ ….. အခြေအနေဆိုးလာတော့ သူကြီးက ရောက်လာပြီးဘာဖြစ်လဲလို့မေးတော့ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်၊…. သူကြီးက ဦးလေးကို မေးတယ်….. ညီလေးရဲ့ တူလေးတွေ ဒီနေ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့မေးတော့…… ကျွန်တော် ချက်ချင်း သတိယလိုက်တာက…..
အင် … မဟုတ်မလွဲရော ဦးလေးပြောတဲ့ မကိုင်ရ မစားရ ဆိုတဲ့ ဟာတွေကိုများ စားမိ၊ကိုင်မိတာ များလာပေါ့…။ ကျွန်တော့်ကိုဘယ်တွေသွားခဲ့သေးလဲလို့သူတို့တွေကမေးတော့ ဒီနေလယ်က ကျွန်တော်တို့ ရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေကို ပြောပြတော့ ….. ရွာလူကြီးမျက်လုံးနှစ်လုံက အပြင်ကိုထွက်လာတော့မဲ့အတိုင်းပဲ သူ့သမီးကို သမီးရေ ရွားလယ်က ဆရာကို သွားပင့်လာလို့ အော်ပြီးပြောလိုက်တော့ …… ကျွန်တော်ချက်ခြင်းသဘောပေါက်သွားတယ် အင် သူတို့ဒီနေ့ကစားတဲ့အရုပ်တွေကြောင့်ဖြစ်မှာပါလို့ စိတ်တဲက တိုးတိုးလေးပြောလိုက်မိတာပေါ့……။
ဆရာရောက်လာတော့ ကျွန်တော်သူငယ်ချင် နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေအတော့်ကို ဆိုးနေပြီးဗျ….. မျက်လုံးတွေ လည်း နီ…..၊ အန်လည်းအန်တယ်၊ ဗိုက်လည်းနား..၊ ကိုယ်လည်းပူနဲ့ လူးလိမ့်နေကြတယ် ကျွန်တော် ကြည့်တောင် မကြည်ရဲတော့ဘူး….။ အဲ့ဒီရွာက ဆရာကဘာပြောတယ်မှတ်လဲ အဲ့ဒီဆရာက ရွားသူကြီးကို ပြောလိုက်တာက သူကြီးရေ သူတို့နှစ်ယောက် လယ်ကွင်းဘးက လယ်သခင်းလေးကိုသွားပြီးသခင်လေးရဲ့လက်ကိုတက်နင်းမိလို့ လယ်သခင်းလေး စိတ်တွေဆိုးလို့သူတို့ကို ဆုံးမတာတဲ့……။ အဲ့ဒါသခင်လေးကို သွားတောင်ပန်ရမယ်တဲ့ မတောင်းမှန်ရင်တော့ အခြေအ နေဆိုးသွားနိုင်တယ်တဲ့……..၊ အမေလေး ကျွန်တော်ကြားရုံနဲ့ ဆံပင်မွေးတွေ ထောင်တက်သွားတာပဲ…..။
ထူးဆန်းတာက အဲ့ဒီဆရာဘာတွေလုပ်လဲမသိဘူးဗျ….. ပြောမပြတက်လောက်အောင်ပဲ….. မှတ်မှတ်ရရက တော့ ကြက်ဖြူတကောင်ကို လယ်လှီးတယ်ဗျ…. နောက်သွေးခံတယ်… အဲ့ဒီသွေးနဲ့ ….. ကြက်ကိုယူသွားတယ် နောက် ရွာလူကြီးရယ် ၊ အဲ့ဒီဆရာရယ် နောက် ရွာသား လေးငါးယောက်ရယ်အဲ့ဒီးကိုသွားပြီးတော့ တောင်းပန်တာပဲ…… ကျွန်တော်တို့တော့လိုက်လို့မရဘူးတဲ့….. ဒါနဲ့သူတို့တွေပြန်လာတဲ့အထိစောင့်ရတာပေါ့ဗျား……။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လည်း စောစောကလို အော်လည်းမအော်တော့ဘူး…… ငြိမ်းသွားတဲ့ ပဲ တကယ့် လူသေတွေအတိုင်းပဲ…။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ရွာသူကြီးတို့ပြန်ရောက်လာတယ်…. နောက်အဲ့ဒီဆရာက ပြောတယ် ကောင်းသွားမှာပါတဲ့ …….. အခုသူတို့တွေအိပ်ပျော်နေပြီးမဟုတ်လားတဲ့…. သူကြီးအိမ်ပ်ါတက်လာပြီး ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် မလှုပ်မရှားပဲ ငြိမ်းနေတာကိုတွေ့တော့ အဲ့ဒီဆရာကိုပြောလိုက်တာက သူတို့လေးတွေ အိပ်နေပြီးတဲ့….အဲ့ဒီ ဆရာလည်း ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတော့တာပဲ…. အဲ့ဒီညက တညလုံးကျွန်တော် အိပ်လို့မရတော့ဘူး…… ကြောက်လည်းနည်းနည်းကြောက်နေတာဆိုတော့….။
မနက်ထတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့တော့…. ၀မ်းသာသာနဲ့ မေးလိုက်တယ်လေ…. မင်းတို့ သက်သာလားလို့မေးတော့… သူတိုက ဟာငါတို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့…. နောက်ကျွန်တော် ကဆက်မေးလိုက်တယ် မနေ့ညမင်းတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတာသိလားလို့မေးတော့ ငါတို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ကောင်းနေတာပဲ လို့ပြောတော့…..ကျွန်တော် လည်း အံ့အားသင့်သွားတာပေါ့……ဒါနဲ့သူတို့ကိုဆက်မမေးတော့ပဲနဲ့ နေလိုက်တယ်လေ… ဒါပေမယ့် သူတို့အဲ့ဒီညက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းလေးကိုတော့ အခုထိ ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲက ထွက်နိုင်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ်လေ…၊၊
ကယ် ဘလောခ်ပေါ်ကသူငယ်ချင်းတို့ရေ အဲ့လိုအဖြစ်အပျက်မျိုး တကယ်မရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ ရင်တော့ ထင်နိုင် ပါတယ် … ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ကြုံလိုက်ရတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့တော့ ယုံရခက် မယုံရခက်ဖြစ်နေလို့ပါဗျား……။ ဒီ အကြောင်းကို ဆုံးအောင်ဖက်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ……. ။